'Xasuusta qofkii aan dilay ayaan xabsiga uga jiri la’ahay' - Jigjiga Online
HomeWararka Caalamka‘Xasuusta qofkii aan dilay ayaan xabsiga uga jiri la’ahay’
‘Xasuusta qofkii aan dilay ayaan xabsiga uga jiri la’ahay’
Nin fal dil ah oo uu geystay xabsi ugu jira ayaa doonaya in dadka kale ay iska ilaaliyaan khaladkii uu isaga sameeyay ee u horseeday inuu gacantiisa qof ku dilo.
Sadam Essakhil oo ka hadlayay wareysi looga qaaday xabsiga dhexdiisa ayaa sheegay inaan loo baahneyn inuu toorri isticmaalo markii ay nin kale isku dagaaleen magaalada Birmingham, halkaasoo hal naf ay ku go’day, hooyana ay wiilkeeda kali ahaa ku weysay.
Wuxuu sheegay in haddii dadka kale ay waddadiisa racaan, ay xabsiga dhexdiisa ku ugaarsan doonto ruuxaanta qofka ay dileen, sida isagaba ku dhacday.
Essakhil wuxuu hadda safka hore uga jiraa ol’olaha ka hor tagga dambiyada lagu geysto toorriyaha ee ay wadaan booliska ka howl gala ismaamul goboleedka West Midlands.
“Mar walba waan ka qoomameeyaa ficilkii aan geystay. Waxaan bannaanka u baxay anigoo aaminsan in toorrida aan nafteyda ku difaacayo laakiin ma garaneynin waxa aan iska difaacayo. Hdda markii aan xabsiga ku jiro anigoo kaligey ah waxaan mar walba ka fikiraa, xabsigana aan uga jiri la’ahay xasuusta ku saabsan qofkii aan naftiisa inay go’do sabab u noqday. Runtii wax wanaagsan ma aha in mar walba ay niyaddaada kusoo noq-noqoto xaqiiqda ah inaad qof dishay, gaar ahaan marka aad kaligaa xabsi ku dhex jirtid. Habeen walba waxaa anigoo soo jeeda ku qarwaa dilkii aan geystay, wax aan smaeyn karana ma jiro”, ayuu yiri.
Ninkan wuxuu hadda qaadanayaa xabsi daa’in uu ku muteystay dil uu geystay markii uu 15 sano jiray, xilligii uu ardayga iskuulka ahaa.
Inkastoo uu horay u beenin jiray inuu dambi ku leeyahay wixii dhacay, ugu dambeyn hadda wuxuu qirsan yahay khaladka uu sameeyay.
Sadam Essakhil wuxuu weerar toorri ah ku dilay Lukasz Furmanek taariikhdu markii ay ahayd 31 May 2015.
Sida dhalinyaro badan oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee Britain, wuxuu aaminsanaa in haddii uu toorri qaato uu naftiisa difaaci karo.
Isaga iyo saaxiibkiis Abdullah Atiqzoy oo 18 jir ahaa ayaa wada socday markii uu dagaal ka dhex billowday iyaga iyo Likas, oo isagana saaxiibkiis uu la socday.
Lukas wuu ku geeriyooday halkaas, saaxiibkiis Joseph Dudek isagana waxaa loo geystay dhaawac aad halis u ah.
Essakhil markii uu falkaas dhacay wuu ka cararay waddanka laakiin markii dambe wuxuu isku dhiibay booliska dalka Belgium. Atiqzoy qudhiisa waxaa lasoo xiray isagoo damacsan inuu u baxsado dhinaca Faransiiska, wuxuuna hadda ku xukuman yahay 26 sano oo xabsi ah..
Sanadkii 2018-kii, ku dhawaad 70 oo carruur ah ayaa waxyeellada toorriyaha loogu geystay West Midlands iyo nawaaxigeeda. Horaantii sanadkanna, saddex dhalinyaro ah ayaa 12 maalmood gudahood lagu dilay.
Booliska West Midlands ayaa dadaal ugu jira sidii ay wax uga qaban lahaayeen dambiyada Middiyaha lagu geysto.
Muuqaal ka kooban 8 daqiiqo oo wacyi galin ah ayaa loo daaray arday dhigata Iskuullada, waxayna tallaabadaas qeyb ka tahay isku dayga dhalinyarada looga dhaadhicinayo inaysan ku dhaqaaqin falalka dilalka ah.
Jidka Isku Xidha Addis Ababa & Harar Oo Xanniban Iyo Tirada Dhimashada Oo Sii Korodhay
AKHRISO: Labadii Arrimood Ee Lagu Wiiqay Awoodihii DMD Iyo Dhallinyarta JW & Qaabka Ay Mar Kale Isku Muujin Karaan